အကောင်းဆုံးကွန်တိန်နာအမျိုးအစား ကွန်ကရစ်သုတ်စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူနှင့် စက်ရုံ |Macpex
စုစုပေါင်း အများဆုံး အချင်း
Additive Weighting တိကျမှု
(၁) မြင့်မားသော ထိန်းချုပ်ခန်းသည် ဆိုက်အခြေအနေများကို အပြည့်အဝ စောင့်ကြည့်နိုင်သည်။
(၂) လေထုနှင့် လှပသော အရည်အသွေးမြင့် ကော်ပြန့်ပြားဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် အစွန်အဖျားများ။
(၃) မြင့်မားသော အလုံးစုံ ခိုင်ခံ့မှု၊ လွှင့်တင်နေစဉ် ပုံပျက်မသွားဘဲ တာရှည်ခံသည်။
(၄) လူသားဆန်သော ဒီဇိုင်း၊ ကြီးမားသော အတွင်းခန်းနှင့် အထောက်အပံ့ ပစ္စည်းများ အပြည့်အစုံ။
(၅) ဘက်ပေါင်းစုံရှိ ပြတင်းပေါက်များဖြင့် လုံလောက်သော အလင်းရောင်နှင့် ကျယ်ပြန့်သော မြင်ကွင်းများ ပါရှိသောကြောင့် ထုတ်လုပ်မှုကို လေ့လာကြည့်ရှုရန် အဆင်ပြေသည်။
2. Water tank နှင့် admixture tank
(1) ထုပ်ပိုးမှုတစ်ခုလုံး တင်းကျပ်ပြီး ယိုစိမ့်မှုမရှိဘဲ ထုတ်လုပ်မှုအရည်အသွေးကို သေချာစေသည်။
(၂) ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ထုတ်လုပ်မှု လိုအပ်ချက်ကို သေချာစေရေးနှင့် စက်ကိရိယာများ မြေယာသိမ်းပိုက်မှု သက်သာစေခြင်း။
(၃) သိုလှောင်မှုနှင့် အချိန်မရွေးအသုံးပြုနိုင်ရန် အရည်အဆင့်ပြသသည့်ကိရိယာများ တပ်ဆင်ထားသည်။
(4) ကြီးမားသောသိုလှောင်မှုပမာဏ၊ ထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့် ပြည့်မီသည်။
3. Batching စက်
(၁) Module ဒီဇိုင်း၊သပ်ရပ်လှပသောပစ္စည်းများအသုံးပြုမှုနှင့် တည်ငြိမ်ဖွဲ့စည်းပုံတို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း။
(၂) ကုန်ကြမ်းသိုလှောင်နိုင်မှုပမာဏ ကြီးမားသောကြောင့် အစာကျွေးချိန်ကို လျော့နည်းစေပြီး လူအင်အား သက်သာစေသည်။
(၃) တိကျမှုနှင့် ချောမွေ့စွာ ထုတ်လွှတ်မှုသေချာစေရန် နှစ်ထပ်ပေါက်တံခါးများနှင့် vibrators များကို အသုံးပြုထားသည်။
1. Modular ဒီဇိုင်း၊ မြန်ဆန်စွာတပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ကုန်ချောပစ္စည်းများကို ငါးရက်အတွင်း
တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ပထမဆုံး လှောင်ပြောင်စာမေးပွဲ စခန်း၏ ဒေသခံစည်းဝေးပွဲကို ဆောင်ရွက်သည်။module တစ်ခုစီကို စက်တွင်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ဒေသတွင်း ရောစပ်ဘူတာရုံတစ်ခုလုံးကို ဘောင်တစ်ခုလုံးဖြင့် ပြီးမြောက်အောင် တပ်ဆင်နိုင်သည်။တပ်ဆင်မှုမှာ အချိန်ကုန်၊ လုပ်သား သက်သာစေပြီး မြန်ဆန် အဆင်ပြေသည်။
2. ဆောက်လုပ်ရေးရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနည်းသော ကြမ်းခင်းဧရိယာ သေးငယ်ပြီး အမြန်ပြန်ရနိုင်သည်။
စက်ပစ္စည်းတပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ဆိုဒ်ရွေးချယ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ရှုပ်ထွေးသောအခြေခံအုတ်မြစ်ကို ပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ဆိုဒ်၏ မာကျောမှု ခံနိုင်ရည်နှင့် ညီညာမှုသည် စက်ကိရိယာ လိုအပ်ချက်များနှင့် ပြည့်မီသရွေ့ စက်ကိရိယာများကို အုတ်မြစ် တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်ခြင်း မရှိဘဲ ပြီးမြောက်နိုင်ပါသည်။
3. အဆင်ပြေသောလွှဲပြောင်းမှုနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော နေရာပြောင်းရွှေ့ခြင်း။ထားခဲ့ရုံပါပဲ။
ရောစပ်စက်ရုံ၏တပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် Modular တပ်ဆင်ခြင်းကိုလက်ခံသည်။၎င်းအား နေရာရွှေ့ပြောင်းရန် လိုအပ်သောအခါတွင် အဆင်ပြေပြီး မြန်ဆန်သည့် ရောစပ်ကိရိယာ၏ ဒေသန္တရ ကြီးမားသောဘောင်၏ အလုံးစုံ ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကို နားလည်သဘောပေါက်ရန်အတွက် ဒေသတွင်း module များကိုလည်း ဖြုတ်တပ်နိုင်သည်။
4. ပရိုဂရမ်တွင် အဆင့်မြင့် ရုပ်ပုံပါရှိပြီး လုပ်ဆောင်ရန်နှင့် သင်ယူရန် လွယ်ကူသည်။
● ကွန်ကရစ်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး၏ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုကို စံသတ်မှတ်ရန် ကွန်ပျူတာကွန်ရက်နှင့် ကွန်ပျူတာ အလိုအလျောက် ထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာကို ချမှတ်ပါ။
● ၎င်းတွင် အချိုးကျခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းနှင့် ချိန်ညှိခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များ ပါရှိပြီး သက်ဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှုဘောင်များကို ထိထိရောက်ရောက် ချိန်ညှိနိုင်ပါသည်။
● စက်ပစ္စည်းများနှင့်ဆက်စပ်သော ထုတ်လုပ်မှုဒေတာသိုလှောင်မှုကို အချိန်မရွေး ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ကြည့်ရှုပြီး ရိုက်နှိပ်နိုင်ပါသည်။
● ထိန်းချုပ်အကန့်၏ ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းသည် ထုတ်လုပ်မှုလည်ပတ်မှုကို လှုံ့ဆော်ပေးသည်၊ ထုတ်လုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုသည် လွယ်ကူပြီး အခမဲ့ဖြစ်သည်။
● ထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည် ကွဲပြားပြီး ဘာသာစကားမျိုးစုံဖြင့် တပ်ဆင်နိုင်သည်။
5. လုပ်ဆောင်ချက်သည် လုံခြုံပြီး တည်ငြိမ်ပြီး ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးနှင့် အရေအတွက်ကို အာမခံပါသည်။
● ရောစပ်စက်ရုံ၏ အလုံးစုံဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ တည်ငြိမ်မှုသည် ကောင်းမွန်ပြီး ထုတ်လုပ်မှုနှင့် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း တုန်ခါမှုပမာဏသည် သေးငယ်သောကြောင့် စက်ပစ္စည်းများ၏ တိကျတည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှုကိုသေချာစေရန်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဖြစ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချရန်။
● ဂျာမန်သံမဏိဝါယာကြိုးကြိုးကို ရွေးချယ်ထားပြီး၊ လွှင့်ပုံး၏အစာကျွေးမှုသည် တည်ငြိမ်သည်၊ လေးမှတ်ကန့်သတ်ချက်၊ ခေါင်မိုးအပေါ်သက်ရောက်မှုနှင့် ဘေးကင်းရေးအချက်မှာ မြင့်မားသည်။
● ၎င်း၏ထမ်းနိုင်စွမ်းရည်နှင့် သိုလှောင်မှုပမာဏကို တိုးမြှင့်ရန်အတွက် သုတ်စက်၏ပစ္စည်းသည် ထူပြီးလေးလံပါသည်။
6. ပုံမှန်ရောင်းချပြီးနောက်စစ်ဆေးခြင်း၊ ရေရှည်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် အိမ်ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း
● "အာမခံကာလသုံးကြိမ်" အတွင်း အဓိကပြည်နယ်နှင့်မြို့ကြီးများသည် 24 နာရီရောင်းချပြီးနောက်ဝန်ဆောင်မှုကိုပေးပါသည်။
● ပုံမှန်ကြားကာလတွင်၊ အထူးရောင်းချပြီးနောက် အင်ဂျင်နီယာများသည် ပုံမှန်စက်ပစ္စည်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ဝန်ထမ်းလေ့ကျင့်ရေးတို့အတွက် ဖောက်သည်၏ဆိုက်သို့ သွားပါမည်။
● ပုံမှန်ပြန်လည်လည်ပတ်ခြင်းနှင့် ဖလှယ်ခြင်း၊ အမျိုးမျိုးသောနည်းပညာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ၏ မြို့ပတ်ရထားရှာဖွေခြင်းဝန်ဆောင်မှုကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး ဖြေရှင်းပေးပြီး သုံးစွဲသူများသည် စစ်မှန်သော၊ မြန်ဆန်၊ တက်ကြွပြီး စာနာထောက်ထားနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုကို ခံစားခွင့်ပြုပါ။
7. နိုင်ငံတော်၏ တောင်းဆိုချက်အရ စွမ်းအင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေး
နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးမှာ ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့ ကောင်းကင်ပြာပြာကြီးကို အမိမြေကို ချန်ထားခဲ့ဖို့ အာမခံပါတယ်။ရောစပ်စက်ရုံ၏ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အမှုန့်ပစ္စည်းများအားလုံးကို အလုံပိတ်အနေအထားဖြင့် ဆောင်ရွက်သည်။ဘိလပ်မြေပုံးတွင် ဖုန်မှုန့်များနှင့် ဆူညံသံများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးသည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေး ဖုန်စုပ်စက်တစ်ခု တပ်ဆင်ထားပြီး အမျိုးသား သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေး မူဝါဒကို အခိုင်အမာ ထောက်ခံပါသည်။
8. ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဒီဇိုင်းသည် ကျွမ်းကျင်လိမ္မာပြီး နိုင်ငံတကာသို့ တင်ပို့ရန်အတွက် အဆင်ပြေသည်။
ရောစပ်စက်ရုံ၏ အလုံးစုံဒီဇိုင်းသည် လိုက်လျောညီထွေရှိပြီး ဖွဲ့စည်းပုံ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီကို ပို့ကုန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် ကွန်တိန်နာထဲသို့ တင်ဆောင်နိုင်သည်။
နောက်တစ်ခု: Planetary mixer